महिला नेतृको नांगो फोटो लिक भएपछि…
एक महिला नेतृको नांगो तस्वीर सार्वजनिक भएपछि युक्रेनमा हंगामा भएको छ । युक्रेनको संसदीय चुनावको मुखमा यो फोटो सार्वजनिक भएको हो । यो नग्न फोटो हो, संसदीय उम्मेदवार ओल्गा युलचकको । तर, उनले भने...
महिलाका तीनवटा स्तन ! (फोटोफिचरसहित)
तपाईं सुन्दै आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ, महिलाका तीन वटा स्तन छन् भनेर । तर, प्रकृतिले दिएको होइन्, महिला आफैले बनाएको । आखिर किन बनाउनु जरुरी भयो त तीन वटा स्तन ? डेटिङ गरेर वाक्क भएकी २१...
आइफोन किन्न गर्लफ्रेण्ड भाडामा !
अहिले एप्पलको नयाँ आइफोन लिन विश्वका विभिन्न देशमा आइफोनका पारखीहरुबीच तँछाडमछाड चलिरहेको छ । आइफोनका नयाँ अर्डर धान्नसमेत एप्पललाई अप्ठेरो परिरहेको छ । पैसा हुनेलाई त ठीकै छ, तर पैसा नहुनेले कसरी किन्ने ?...
नाक नभएकी बालिका
तपाईं आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुन्छ, आयरल्यान्डकी एउटी बालिकाको नाक छैन । टेसा इवांस नाम गरेकी यी बालिकाको जन्मँदा खेरी नै नाक थिएन । अरहिनिया नामक दुर्लभ रोगका कारण उनको नाक नभएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । संसारभर...
खेलाडीको गुप्तांग झल्किने पहिरनले हंगामा
राष्ट्रिय महिला खेलाडीको गुप्तांग झल्किने पहिरन कोलम्बियामा हंगामा भएको छ । कोलम्बियाको महिला साइकल टोलीले विवादास्पद खेल पहिरन सार्वजनिक गरेका हुन् । आफ्ना पुरुष समकक्षी खेलाडीहरुको सिको गर्दै उनीहरुले पनि यो पहिरन सार्वजनिक गरेका...
कति लामो जिब्रो !
तपाईंको जिब्रो कति लामो छ अनुमान गर्नुभएको छ ? तपाईं आफ्नो जिब्रोले कुहिनो चाट्न सक्नुहुन्छ ? नाकको टुप्पो त पक्कै छुन सक्नुहुन्छ होला ? तर, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका २४ वर्षीय निक स्टोइबर्लको जिब्रो भने १०...
युवतीले गरे युवकको बलात्कार
पुरुषले महिलाको बलात्कार गरेको घटना त दिनहुँ सुन्दै आएको छ । नेपालमा पनि दैनिक यस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, यो प्रसंग भने महिलाले पुरुषले बलात्कार गरेको हो । सुन्दै आश्चर्य लाग्ने यो...
छोरा नभएको झोंकमा लिंगै चट
भनिन्छ्, छोरा र छोरी दुवै बराबरी । तर, कसैलाई छोरा नै चाहिने । छोरा चाहियो भन्दै दिनहुँ श्रीमतीसँग झगडा गर्ने एक पुरुषले आफ्नै लिंग काटेका छन् । घटना हो भारतको । भारतको एक गाउँका...
एक किसको मुल्य डेढ करोड रुपैंया
चुम्बन भावनामा साटिन्छ । अर्थात यो पैसासँग लिनेदिने वस्तु होइन् । तर, एक हलिउड अभिनेत्रीको चुम्बन डेढ करोड रुपैंया भन्दा बढीमा लिलामी भएको छ । हलिउड अभिनेत्री एलिजाबेथ हर्लीलाई किस गर्नका लागि जुलियन भारती...
एक रात सँगै सुतेको ६४ लाख रुपैंया !
एजेन्सी । सेलेब्रेटी भएपछि मानिसहरु भुतुक्कै नहुने त कुरै भएन । फ्यानहरुका विभिन्न अफररु पनि आइरहन्छन् । बेलायतकी एक २७ वर्षीया चर्चित मोडल तथा गायिका लरेन गुडगरलाई भने एक रात सँगै सुतेको ६४ दिने...
किन कुकुरसँग विहे गरिन् युवतीले ? (फोटोफिचरसहित)
एजेन्सी । मानिसले कुकुरसँग विहे गरेको सुन्नु भएको छ ? तर भारतमा भयो यस्तै । झारखण्ड की १८ बर्षीया युवतीले कुकुरसँग बिहे गरेकी छिन्, त्यो पनि राजीखुसी । तर किन ? कारण सुन्नुभयो भने...
मुर्दाघरको लास २ दिनपछि बोल्न थालेपछि…
सुन्दै अचम्म लाग्ने यो घटना हो, भारत उत्तर प्रदेश अलीगढको । सवारी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका एक व्यक्ति मृत घोषणा गरेको दुई दिनपछि एकाएक बोल्न थालेपछि सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । घटना विवरण...